Zonke izinto ezinokonwatyelwa kwi-intanethi
INTO ENOKONWATYELWA KWI-INTANETHI
4.89 (151)Ifumene 4.89 kweziyi- 5 kwizimvo eziyi- 151.
·Kraków, Poland·Inxalenye Yezinto Onokuzonwabela Kwi-intanethi Zakwa-Airbnb
Bonisa zonke iifoto eziyi-5
Into enokonwatyelwa kwi-intanethi ekhokelwa nguKlaudia
· Ubuka iindwendwe ngesi-IsiNgesi
Imibhiyozo, ukudibana ngomsebenzi, nezinye.
Ukubalisa ibali kamnandi
Iindwendwe zithi lo Mbuki Zindwendwe ubalisa amabali amnandi.
Indlela yokuthatha inxaxheba
Joyina ukufowuna ngevidiyo
Sebenzisa uZoom ukuze uthathe inxaxheba ngekhompyutha okanye ngefowuni yakho. Emva kokubhukisha uza kufumana i-imeyile enelinki neenkcukacha zendlela yokuyijoyina.
UKlaudia angabuka amaqela abucala anabantu nokuba bangakanani, ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi-100. Amaxabiso eqela labucala aqala kwi-$114.
Dibana nombuki zindwendwe wakho, uKlaudia
Ukususela kwi-$126 ngeqela ngalinyeUkususela kwi-$126 ngeqela ngalinye
Amaqela abucala kuphela
Yi-$21 umntu ngamnye$21umntu
Izinto Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi zakwa-Airbnb
Ababuki zindwendwe abakucingelayo
Bazi ngakumbi ababuki zindwendwe ababonisa ngezinto abazithanda kakhulu nabakukrobisa kwindlela abaphila ngayo.
Izinto ezenziwa ngamaqela amancinci
Dibana nabantu abavela kwamanye amazwe ngoxa nifunda into entsha kunye.
Ilula kwaye yeyehlabathi lonke
Joyina ngokulula uze uthathe inxaxheba usekhaya ngaphandle kokwenza amalungiselelo amaninzi.
4.89 (iingxelo zokuhlola 151)
Ifumene 4.89 kweziyi- 5 kwizimvo eziyi- 151.
Yi-$18 umntu ngamnye$18umntu
Iindwendwe ezineminyaka eyi-15 nangaphezulu zinokuza, ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi-100 xa zizonke.
Kuza kufuneka ukwazi ukumamela nokubukela ividiyo kwi-intanethi ukuze uthathe inxaxheba.